Iligi kanobhutshuzwayo ivumbulula ikhono eWillowfontein – Msunduzi News
IWILLOWFONTEIN Football League iba nemidlalo minyaka yonke kusuka ngoNhlaba kuya kuMandulo eWillowfontein. Inhloso yalo mncintiswano ngukukhuthaza intsha ukuba izihlanganise nezemidlalo ukuze igweme ubugebengu, ukusebenzisa izidakamizwa kanye nobunye ubudlobongela emphakathini.
Le ligi inamaqembu ali-11 kuyo yonke iWillowfontein kanti le midlalo idlalwa ngeSonto KwaBhakabha Sports and Recreation Centre kusuka ekuseni lize lithambame. USihlalo weligi uNhlanhla Shibase Zondi ekhuluma noMsunduzi News uthe; “Isizathu esikhulu esangenza ngasungula le ligi ukusiza intsha ukuba iziqhelelanise nezidakamizwa futhi inhloso wukuba le ligi ibhaliswe kuSAFA (South African Football Association).”
IWillowfontein League isikhiqize abadlali abadlala ku-ABC Motsepe League. UMnu uZondi uthe; “Sikhiqize abadlali asebeku ABC Motsepe League, esingabala uMaboni “Cheeseboy” Nqayi, uSthembiso Hlongwane, uSihle Hlongwane bonke laba badlalela iMovers FC esanda kwenyukela kulesi sigaba. Sibuye sibe noSphesihle Dlamini odlalela iMaritzburg City kanye noSandile “Sergio” Mkhwanazi osaxoxa namaqembu amaningi aku-ABC Motsepe League.”
UMnu uZondi uthe izingxoxo zisezingeni elphezulu phakathi kweWillfountain Football League nosomabhizinisi bendawo ngokuthola uxhaso. Uthe; “Abalandele nabadlali bangalindela isimemezelo esisemqoka maduze mayelana nokuxhaswa.” IMighty Boys iyona eziholayo ngamaphuzu angama-21 emidlalweni eyisi-7 ilandelwe yiFC Shibaselona “A” ngamaphuzu angama-16 emidlalweni elinganayo. ULindokuhle “Ibu” Zondi weFC Shibaselona “A” uyena ohamba phambili osehlohle amagoli ayisi-9 emidlalweni eyisi-7.
Previous post: OwaseNamibia udle ubhedu kuSPAR 10km
Next post: ImaritzburgUnited ilangazelele ukuqeda kuTop 8